ဆင်သရေ ကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး လှုပ်ရှားမှု WWF စတင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဆင်သရေ ကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး လှုပ်ရှားမှု WWF စတင်
epa03617375 A photo made available on 10 March 2013 shows Thai forensic police and forest officers inspecting the corpse ofawild elephant, found with bullet wounds inajungle of Kaeng Krachan National Park, on the border with Myanmar, Phetchaburi province, Thailand, 09 March 2013. Two ethnic Karen hunters were charged with allegedly killingawild elephant to poach its baby for illegal trading, local media reports. An estimated 2,000 wild elephants still exist in Thailand. EPA/STR THAILAND OUT
ဆင်သရေ ကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး လှုပ်ရှားမှု WWF စတင်
ကမ္ဘာ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (WWF) က မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဆင်ရိုင်းတွေသတ်ပြီး ဆင်သရေ ခွာယူမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အရှေကတောင် အာရှအစိုးရတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံ – (STR/EPA)
ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေထဲမှာ ဆင်ရိုင်း အသတ်ခံရမူဟာ နှစ်ဆတိုးလာကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံပြီးရင် ဆင်ရိုင်းကောင်ရေ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်ရိုင်း ၁၄၀၀ ကနေ ၂ ထောင်အတွင်း ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပေမယ့် တကယ့်အရေအတွက်က အဲဒီထက် နည်းနိုင်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ ဆင်စွယ်အတွက် ဆင်ထီးတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ ဆင်သရေအတွက် ဆင်ရိုင်းတွေကို သတ်ဖြတ်လာတာကြောင့် ဆင်မတွေနဲ့ ဆင်ပေါက်ကလေးတွေပါ အန္တရာယ် ကျရောက်နေပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် #SaveTheirSkin လှုပ်ရှားမှုကို စတင်ပြီး ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး သင်တန်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ တန်ဆာပလာတွေ ရနိုင်ဖို့ ရန်ပုံတွေ ထူထောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ AFP သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ကျိုက်ထီးရိုးရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဆင်သရေ တစ်လက်မှ ပတ်လည်ကို ၅ ထောင်ကျပ်နဲ့ ရောင်းနေတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆင်သရေ ကုန်ကူးမှုက မြန်မြန်ကျယ်ပြန့်နေတယ်၊ အာရှမှာ ဝယ်လိုအားရှိလာလို့ ဆင်သရေကုန်ကူးမှု များလာပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကလည်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် တရားမဝင် လုပ်ဆောင်နေမှုတွေမှာ အားနည်းတယ်လို့ WWF မြန်မာ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ ခရစ္စတီ ဝီလျံက Coconuts Yangon အွန်လိုင်း သတင်းဌာနကို ပြောထားပါတယ်။
Previous articleနှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း အာရွန်ဒါတီ ရွိုင်ရဲ့ ပထမဆုံးဝတ္ထု စတင်ဖြန့်ချိ
Next articleတိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းက ကလေးလူငယ်တွေ ကျောင်းထွက်နှုန်းမြှင့်မားလာ (ရုပ်/သံ)